Showing ६१-७० of ६५२ items.
बलिउडमा कास्टिङ काउचको विषयले चर्को रुप लिइरहेको छ । कास्टिङ काउचको अर्थ हो नयाँ युवतीहरुलाई फिल्ममा काम दिलाउने बहानामा गरिने यौन उत्पीडन । हालै अवार्ड विजेता मराठी अभिनेत्री उषा जाधवले कास्टिङ काउचबारे आफ्नो अनुभव सेयर गरेकी छिन् । इन्डष्ट्रीमा शक्तिशाली व्यक्तिहरुले नयाँ अभिनेत्रीसँग सेक्सुअल फेबर खोज्नु आम कुरा भएको उनले बताइन् । आफूर्लाइ पहिलोपटक फिल्ममा मौका दिने व्यक्तिले त्यस्तै फेभर मागेको उनको भनाई छ । उषाका अनुसार त्यतिबेलाको संवाद यस्तो थियो : निर्माताः हामीले तिमीलाई काम दियौं, त्यसको बदलामा केही त फर्काउ ? उषाः खोई के दिउँ, पैसा त मसित छैन । निर्माताः हामी पैसाको कुरा गरिरहेक
प्रकाशित मितिः बैशाख १४, २०७५
नायिका प्रियंका रथमा शहर किन घुमिन् ?
नेपाली चलचित्रका निर्माताहरुले चलचित्र प्रचारका लागि विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन् । कहिले पिज्जा डेलिभर गर्दै फ्यानको घरमा पुग्ने त कहिले विभिन्न स्थानमा कन्सर्ट गर्ने । नयाँ-नयाँ उपायले चलचित्रको प्रचारमा फाइदा पनि मिलिरहेको छ । यसैक्रममा, चलचित्र ‘ह्याप्पी डेज’को यूनिटले चलचित्र प्रचारका लागि नयाँ शैली अपनाइएको छ । चलचित्र प्रचारका लागि ललितपुरको लखनखेलबाट ‘रथ यात्रा’ गरिएको छ । लखनखेलबाट सुरु भएको ‘रथ यात्रा’मा नायिका प्रियंका कार्की र नायक संजय गुप्ता सहभागी थिए । उनीहरुले, चलचित्रको नाम लेखिएको टिसर्ट लगाएका थिए । लखनखेलबाट सुरु भएको ‘रथ यात्रा’ भृकुटीमण्डपमा आएर समापन भएको थियो । उपस्थित
प्रकाशित मितिः बैशाख ११, २०७५
अष्ट्रेलियामा आर्यन र सपनाको रोमान्स
नायक आर्यन सिग्देल यतिबेला श्रीमतीसहित अष्ट्रेलियामा घुमघाम गरिरहेका छन् । आफ्नो फिल्म कायराको सुटिङ सकिएपछि फुर्सद लिएर उनी त्यहाँ पुगेका हुन् । आर्यन र उनकी पत्नी सपना भण्डारीले बिहिबार अष्ट्रेलियामै आफूहरुको विवाहको वाषिर्कोत्सव मनाए । यो जोडीको विवाहको पाचौं वर्ष पुरा भएको छ । उनीहरुले सन्तान भने जन्माएका छैनन् । बिहिबार बिहानै सपनाले फेसबुकमा आर्यनलाई वैवाहिक वाषिर्कोत्सवको शुभकामना दिइन् । सपनाले अष्ट्रेलिया घुमघामका केही तस्बिर पनि फेसबुकमा पोष्ट गरेकी छिन् ।
प्रकाशित मितिः बैशाख १०, २०७५
रेखा र निर्देशकको सँधै लफडा, सम्झनाले हात झिकिन् उनको फिल्मबाट
चलचित्र ‘हिम्मतवाली’ निर्माण गर्दा नायिका रेखा थापा र निर्देशक श्याम भट्टराइको सम्बन्ध निकै सुमधुर थियो । श्यामले चलचित्रको छायांकन पनि सुरु गरे । तर, छायांकनको बीचमै रेखा र श्यामविच मनमुटाव सुरु भयो । पछि, श्यामले चलचित्र छाडे । श्यामले चलचित्र छाड्दै गर्दा रेखाले उनलाई निकालेको अभिव्यक्ति दिइन् । श्यामले भने रेखाले अरुको कुरा सुनेर आफूसँग झगडा गरेको बताए । श्याम अहिले अमेरिकामा छन् । श्याम मात्र होइन, नायिका रेखा थापाको उनीसँग काम गर्ने प्राय निर्देशकसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम रहन सकेको छैन । कलाकारसँग त उनको मनमुटाव परेको घटना अक्सर सुनिन्छ । रेखाले चलचित्र ‘रुद्रपि्रया’ असफल भएपछि आफ्नै
‘मन त हो’ नामक नेपाली चलचित्रको झापामा शुभमुहुर्त
विर्तामोड । युरोप, अमेरिका मोहका कारण नेपालका शिक्षित जनशक्ति पलायन हुने क्रम बढेको छ । अलि कम शिक्षा लिएका तथा अर्थिक अवस्था कमजोर भएका युवा युवती रोजगारका लागि बिदेशिनु बाध्यता बनेको छ । तर, आर्थिक अवस्था सबल भएका उच्च घरानाका युवा युवतीमा पनि बिदेशिने रोगले च्यापेको छ । एउटा शिक्षित युवक बिदेशमा गएर अझ सुख सयल पाउने भन्दै नेपाल छोड्छ । अष्ट्रेलिया गएको उसले उतै बिवाह गर्छ । उसका दुईजना सन्तान पनि हुन्छन् । उमेर हुन्जेल श्रम गरेर रमाएको उ जब बुढेसकालले समाउछ तब नेपाल फर्किन खोज्छ । नेपाल फर्किने बेलामा उतै जन्मेका उसका सन्तानले नेपालमा आफ्नो केही र कोही नभएको भन्दै यता आउन दिदैनन् । र त्य
प्रकाशित मितिः बैशाख ८, २०७५
बलिउडमा नायक र नायिकाहरुले पाउने पारिश्रमिकबीच ठूलो अन्तराल छ । नायिकाहरुको तुलनामा धेरै गुणा बढि पारिश्रमिक नायिकाहरुले पाउँछन् । उदाहरणका रुपमा लिउँ, कट्रिना कैफ र बरुण धवनको । यो जोडी एउटा नयाँ फिल्मको लागि अनुवन्ध भएको छ, जसको नामाकरण हुन बाँकी छ । पारिश्रमिकको कुरा गर्ने हो भने तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ । वरुणभन्दा कट्रिना निकै सिनियर कलाकार हुन् । तर यो फिल्ममा कट्रिनाको भन्दा बरुणले झण्डै पाँच गुणा बढि पारिश्रमिक पाएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार फिल्ममा वरुणले ३२ करोड पाएका छन् भने कट्रिनाले केवल ७ करोड । फुच्चे स्टारहरुको त यो कुरा छ भने सलमान, शाहरुख र आमिर खानको कुरा के गर
प्रकाशित मितिः बैशाख ६, २०७५
सर्टमुभि हाम्रो जीएफ सार्वजानिक (हेर्नुहाेस् भिडियाे)
क्रेजी इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि.ले निर्माण गरेको नेपाली कथानक छोटो चलचित्र हाम्रो जीएफ सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ वर्षको अवसरमा क्रेजी इन्टरटेनमेन्टको युट्युव च्यानलबाट सो सर्टमुभी सार्वजनिक गरेको हो । सर्टमुभिमा सन्तोष राई (छत्र), निशा इम्बुङ, करण धिताल, हिमाल राई, नरेन राई, पेम्बा सेर्पा र दिपेन घलेको अभिनय गरेको छ । सर्टमुभिलाई सञ्चारकर्मी सन्तोष राईले पहिलो पटक निर्देशन गरेका हुन् । निर्दशक राईले दर्जन बढी म्यूजिक भिडियो निर्देशन पछि पहिलो पटक छोटो चलचित्र निर्देशन गरेका हुन् । सर्टमुभिको कथा सन्तोष राई (छत्र)को रहेको छ, भने सम्पादन दिनसन साहले गरेका छन् । पूर्वको झापा र मोरङमा छायांकन गरिएको
१४ वर्षअघि सलमान खानसँगको विवादका कारण फिल्ममा एकसाथ काम नगर्ने कसम खाएकी प्रियंका चोपडा पुन: एक पटक सलमानसँगै देखिने भएकी छन्। प्रियंका फिल्म 'भारत' मा सलमानको अपोजिटमा अनुबन्धित भएकी हुन्। यी दुईले करिब १४ वर्षअघि 'मुझसे सादी कारोगी' र 'गाड तुस्सी ग्रेट हो' जस्ता फिल्ममा एकसाथ देखिएका थिए। उनीहरुले पुराना कुरा भुलेर पुन नयाँ सम्बन्धको ढोका खोलेका हुन्। केही दिनअघि प्रियंका आफैं सलमानको घरमा गएर असमझदारी हटाएर एकसाथ काम गर्ने कुरा टुंग्याएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। सलमान र प्रियंकाबीचको तिक्तता सलमानकी बहिनी अर्पिताले मेटाउँदै सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका खेलेको जनाइएको छ। अर्पिता
भारतीय अभिनेता सलमान खानलाई कन्सर्टका लागि नेपाल आउन अदालतले अनुमति दिएको छ । कालो हरिण शिकारको मुद्दामा ५ वर्षको सजाय सुनाइएपछि जमानतमा छुटेका उनलाई अर्को सुनवाईसम्म विदेश जान प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार जोधपुर अदालतले सलमानलाई नेपाल लगायत ३ राष्ट्रको भ्रमण अनुमति दिएको हो । उनले विदेश जानका लागि अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनको निवेदनमाथि मंगलबार जोधपुर अदालतले सुनवाई गर्दा २५ मेदेखि १० जुलाईसम्म विदेश भ्रमणको अनुमति दिइएको छ । यो अवधिमा सलमानले क्यानाडा, नेपाल र अमेरिकाको भ्रमण गर्नेछन् । आफ्नो ‘द ब्याङ टुर’ अन्तरगत सलमानले आउादो १२ जेठमा काठमाडौंमा प्रस्तुति दि
दुई नायिकासंग नाचे बुद्धि (हैट)
टेलिभजिनको दुनियामा डिट्ठा साबको नामले चिनिएका हाँस्य कलाकार किशोर भण्डारीले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘चङ्गा’ को पहिलो गीत रिलिज गरिएको छ । कम्पनी माला बोलको गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकारहरु अटाएका छन् । राजन राज सिवाकोटी र अन्जु पन्तको आवाजमा रहेको उक्त गीतमा राजनराजको संगित र राजेन्द« थापाको शब्द रहेको छ । कबिराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियो ट्रिपिकल नेपाली लोक शैलीमा नै निर्माण गरिएको छ । रिश्मा तिमल्सिनाको निर्माणमा तयार भएको यस चलचित्रमा बुद्धि तामांङ , राजन खतिवडा, कमलमणी नेपाल, अंकित खड्का, लक्ष्मी वर्देवा, राजन खतिवडा, जीवन भट्टराई लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । पुर्णत